FANAZAVANA, FITSIPIKA SY FAMPIANARANA MIKASIKA NY TANJONA FOTOTRA IREO VEHIVAVY TSY MISY TSY MISY TSY MISY TSY MISY TSY MANAIKY AZY. NY FANDRAISANA ETO AMIN'ITY TENIN'IZAO TANTERAKA IREO FIVORIANA IREO TANTSAHA, FITSIPIKA SY RATSY.
Amin'ny fidirana amin'ity tranonkala ity, dia manaiky ny hampifanaraka an'ity tranonkala Terms and Use of Use ity, ireo lalàna sy fitsipika azo ampiharina, ary manaiky fa tompon'andraikitra amin'ny fanarahan-dalàna amin'ny lalàna misy eo an-toerana ianao. Raha tsy manaiky ny iray amin'ireto fehezanteny ireto ianao, dia voarara tsy ampiasaina na miditra amin'ity tranonkala ity. Ny fitaovana hita ato amin'ity tranonkala ity dia voaro amin'ny zon'ny mpamorona sy ny marika momba ny varotra.
FIVORIANA ANY AN-TANY
Mandefa ny baiko avy amin'ny United States Postal Service (www.USPS.com)
Ho an'ny rehetra dia avelao ny baiko rehetra napetraka any Etazonia 7-9 andro fiasana hatramin'ny andro handoa-trosanao anao mandray Ny fonosana (faran'ny herinandro sy ny fialan-tsasatra dia tsy natao ho andro fiasana). Izany dia fialantsiny mifototra amin'ny fotoana fandefasana entana ary noho izany dia mety ho ela kokoa na ho fohy kokoa noho ny androm-pandraharahana 7-9.
Ny fotoana fizahana dia 5-6 andro Ny fandefasana dia andro 2-3 izay nahitana ny totalin'ny 7-9 andro fiasana. Izany dia fialantsiny mifototra amin'ny saram-pandefasana sy ny fotoana fanodinana ary mety ho lava kokoa na kely kokoa noho ny andro voatondro 7-9.
Raha mandidy ny fanakatonana na ny serivisy omenareo dia omena mihoatra noho ny voalaza ny ETA.
Afro Mila fotoana bebe kokoa i Kinky.
Mandritra ny fialan-tsasatra sy ny fivarotana / fampahafantarana dia misy ny 1-3 ny fametrahana ny androm-piainan'ny orinasa miasa amin'ny alàlan'ny baiko maro.
Ny lahatahiry fanisana dia hapetraka amin'ny baiko rehetra aorian'ny fotoana efa nahazatra.
Ny Hair Extensions na voajanahary dia TSY tompon'andraikitra amin'ny karazan-tsakafo rehetra na ny nangalatra tao amin'ny dingan'ny fandefasana. Tsy manakarama ireo mpividy amin'ny fonosana izay very na nangalatra noho ny toe-javatra tsy nampoizina avy amin'ny My Natural Hair Extensions. Raha te hampiditra fiantohana amin'ny entana ianao dia antsoy azafady na alefaso mailaka alohan'ny hametrahana ny baikoo.
Mametraha ny lamandy amin'ny daty iray izay hanome anao fotoana ampy handraisana ny baiko alohan'ny hanendrena anao volo. Ny fotoana fanaraha-maso dia tsy azo atao ny mivoatra na maneho azy. Na izany aza dia azo aseho ny fotoana fandefasana entana.
TANJONA iraisam-pirenena (firenena hafa ankoatra an'i Etazonia)
Ny didy rehetra napetraka any amin'ny firenen-kafa dia avelao ny 5-6 andro hikarakarana ary handefa laharan-tariby mankany amin'ny baikonao. Ny fotoana andefasana dia miovaova amin'ny toerana tsirairay.
Ny baiko dia alefa amin'ny alàlan'ny UPS (www.UPS.com) Ny sandan'ny fitaterana dia miovaova amin'ny toerana tsirairay.
Ny fandefasana dia faran'ny 20 $ - $ 65 ho an'ny baiko iraisam-pirenena.
Isika dia tsy tompon'andraikitra amin'ny entana na ny entana entina amidy amidy. Tsy manakarama ireo mpividy amin'ny fonosana izay very na nangalatra noho ny toe-javatra tsy fantatra izay nivoaka avy amin'ny My Natural Hair Extensions Control. Raha te hampiditra fiantohana amin'ny entana ianao dia antsoy azafady na alefaso mailaka alohan'ny hametrahana ny baikoo.
3. Politika refunda
VAROTRA VOALOHANY, TSY MISY REFUNDS. VOKA-TRANO.
Azonao atao ny manafoana ny baiko rehefa vita ny ora voalohany amin'ny 24. Ny fakana an-keriny dia raisina an-tanandeham-bola ary tsy hanaja ny fanafoanana isika rehefa tapitra ny fe-potoana 24 hr. Raha araka ny fahamendrehantsika no ahafahantsika mamela ny fanovana ny filaminana, raha avelantsika hanova ny baiko dia hisy izany Ny fiovaovan'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny $ 15.
Mangataka ny fifanakalozana Tokony hitranga ao anatin'ny andro voalohany 7 aorian'ny nanombohanao ny fonosana afa-miala. Ho an'ny toe-javatra manokana izay mifototra amin'ny alàlan'ny Hair Natural Hair Extensions dia mety ho azo atao ny fifanakalozana. Mba hahafahanao manakalo ny volonao dia ny volo rehetra dia tokony haverina tsy voavolavola, tsy miovaova amin'ny marika sy tombo-koditra rehetra tsy misy ao anatin'ny andro voalohany 7. Ny fanovana rehetra dia hisoroka ny fifanakalozana volo. Tafiditra ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny volo rehetra izay tapaka, kofehy, kofehy vita amin'ny kofehy, ary kiraro. Ny volo rehetra izay efa maina, voahodina, miboridana na fehezina dia tsy azo ovaina
Ohatra iray amin'ny antony iray tsy manome fifanakalozana dia "mila zavatra hafa aho" na "tsy araka izay tiako" dia tokony hisy olana fototra amin'ny vokatra na fahadisoana nataon'ny MNHE. Ny volo dia vokatra ara-pahasalamana, raha vao nandao ny toerantsika izy dia tsy afaka nampiasa na hampivelatra izany raha vao nosokafan'ny mpividy. Ka noho izany ny fifanakalozana ara-bola sy ny famerenana amin'ny laoniny dia mafy.
Misy ny fandoavam-bola amin'ny $ 20 noho ny fanomezan-dalana rehetra, ny famoahana sy ny fifanakalozana izay mahafeno ny fepetra takina amintsika.
Ny LAW sy ny fitsipika ara-pahasalamana Florida dia ny My Natural Hair Extensions LLC dia voatery ary nitaky ny hanohana ireo fenitra ireo. Isika dia TSY manao fanatanjahan-tena.
Raha manapa-kevitra ny hamela mpividy fifanakalozana dia tompon'andraikitra amin'ny vidin'ny fandefasana entana. MNHE tsy handoa na hanonitra ny mpividy amin'ny saram-pandefasana vahiny na vahiny.
Tahaka ny amin'ny orinasa rehetra, ny varotra rehetra nividy amin'ny varotra, miaraka amin'ny code discount, na ny promo items dia ny fivarotana farany.
Ny fitaovana ao amin'ny MyNaturalHairExtensions.com dia nomena "tahaka ny". Tsy manome antoka isika, na maneho na misolo-tena ary manilika ireo fanomezan-toky hafa rehetra, anisan'izany ny tsy fisian'ny famerana ny antoka rehetra. Ankoatra izany, ny My Hair Hair Extensions Co. dia tsy manome alalana na mampiseho ny fisoratana, ny vokatra mety, na ny azo antoka amin'ny fampiasana ny fitaovana ao amin'ny tranonkalan'ny Internet na raha tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovana toy izany na amin'ny tranonkala mifandraika amin'ity tranonkala ity.
Ireo fitaovana miseho ao amin'ny MyNaturalHairExtensions.com dia mety ahitana fotodrafitrasa ara-teknika, soratra, na sary. Tsy milaza izahay na milaza fa ny iray amin'ireo fitaovana ao amin'ity tranonkala ity dia marina, feno, na misy ankehitriny. Ny Natural Hair Extensions Co. dia mety hanova ny fitaovana hita ato amin'ity tranonkala ity, anisan'izany ny fepetra sy ny fepetra, ny politikam-pandefasana, politika refesina amin'ny fotoana rehetra tsy misy filazana. Na izany aza, tsy manao fanoloran-tena hanavao ireo fitaovana izahay. Ny Hair Natural Hair Extensions Co. dia afaka mamerina mandinika ireo fampiasana ireo ho an'ny tranonkala amin'ny fotoana rehetra tsy misy filazana. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity dia manaiky ny hampifanaraka ny dikan-teny amin'izao fampiharana izao.
hiala fanehoan-kevitra hanafoana ny valin-